Dowlada Britain oo Saafirkii Britain u fadhiyay Soomaaliya badashay safiir cusubna soo magacaawday |
Dowlada Britain oo Saafirkii Britain u fadhiyay Soomaaliya badashay safiir cusubna soo magacaawday
Boqortooyada Ingiriiska ayaa waxa ay Safiir cusub u soo Magacaawday dalkaan soo kabanaya ee Soomaaliya iyada oo lagu wado in uu shaqada kala warego Safiirkii hore Matt Baugh oo in badan Britain u metelayay Soomaaliya.
Safiirka cusub ayaa lagu magacaabaa Neil Wigan, sida lagu sheegay War Saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Ingariiska oo shaacisay in ay is-bedelkan u sameeysay sii horumarinta xariirka u dhexeeya labada dal oo ah mid u baahanin boorka laga jafo.
Neil Wigan ayaa horay waxa uu u ahaa safiirka Ingiriiska ee Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Kongo halkaasi oo uu in badan ka soo howl gelayay, halkaasi oo ay ku cadahay qibarada uu u leeyahay ka shaqeynta dalalka Mushkiladuhu daashadeen.
Ninka lagu bedelay Matt Baugh ayaa waxa uu muujiyay dareenkiisa kadib magacaabistiisa Soomaaliya isaga oo yiri, “Waxaan aad ugu faraxsanahay, uguna faanayaa Magacaabista la ii soo Magacaabay Soomaaliya oo weli ku jirto xaalad adag, Waxeyna Somaaliya horey u qaaday talaabooyin waaweyn oo dhanka siyaasada ah sanadihii u danbeeyey, Iyadoo Kooxda Al-Shabaab laga saaray Magaalooyinka waaweyn, Xukuumada cusubna ay la wareegtey xafiisyadeeda muhiimka u ah hanaanka dowladnimo”.
Lama sheegin wali xilliga rasmiga ah ee shaqada ay ku kala wareegayaan labadaani masuul, waxaana si aad ah loo dareemayaa xilligaan in Ingiriisku uu doonayo in uu noqdo dalka ugu horeeyay ee Soomaalida xariira la leh.
Matt Baugh ayaa waxa uu wax badan ahaa safiirka Britain Soomaaliya inkasta oo uu ku dhex shaqeynanay saldhigga AMISOM ee Xalane halkaas oo ah fadhiga safaradaha Reer Galbeedka.